Wedzera Izvi Zviviri zvinhu kuKutumira Kwese, uye Bhurogu Yako Inoputika Mukurumbira | Martech Zone
Wedzera Izvi Zviviri zvinhu kuKutumira Kwese, uye Bhurogu Yako Inoputika Mukurumbira
China, January 2, 2014 China, January 2, 2014 Douglas Karr
Wazviona here zvandakaita ipapo? Yese, cheesy, off-the-machati linkbait… Uye zvakashanda. Iwe uripano nekuti ini ndakanyora blog post chinyorwa mune imwe nzira. Iyi ndiyo nzira yakakosha pamasaiti senge Akakodzera uye Buzzfeed uye ivo vakadhonza mamirioni evaverengi nekugadzirisa avo posvo mazita ekuti vangori ne2 akakosha zvinhu ... kuda kuziva uye nemanzwiro.
chiringa - nekutaura zvinhu zviviri, pfungwa dzako dzinotanga kushamisika uye muyedzo wekubaya nepakati wakanyanya.
Emotion - Ini ndakanyatsoshandisa izwi iri mukurumbira mumusoro wepositi. Ndiani asingade kuti yavo blog ive inozivikanwa?
Izvi zvinhu zviviri mu zita rekutumira zvinobudirira kuseka asi iwe unofanirwa kuzvishandisa nekungwarira kwakanyanya. Ndatoneta nemasaiti andambotaura pamusoro. Kunyangwe ivo vachiwanzova nezvisingadzivisike zvemukati, ini handiwane kukosha mavari uye kazhinji ndinorasikirwa nemaminetsi akakosha ndichiona mifananidzo yekitsi kana kutarisa nyaya dzinosvimha misodzi. Ongorora: Ini handina kubatanidza kune iwo masosi nekutya kurasikirwa nehanya kwako kune anotevera 45 maminetsi.
Izvi zvinoreva here kuti iwe unofanirwa kudzivirira zano? Kwete… asi ndinofunga unofanirwa kuchengetedza mazita ekuti asapfuure nepamusoro uye nekuendesa zvawati iwe unozoda. Ini ndinoona kuti mazhinji emasaiti anoshandisa aya maitiro haasangane netarisiro yemusoro. Tone pasi zvishoma notches uye iwe uchaiwana yakanakisa zano.
Saka… ngatiti iwe uri mutori wemifananidzo uye une chinyorwa pamazano masere ekutora mifananidzo. Panzvimbo peyakajairwa ol ' 8 Mazano blog post, iwe unogona kunyora chinyorwa senge Ita Aya Matanho 8 Akareruka Usati Watora Wako Unotevera Mufananidzo uye Unozoshamiswa neMhedzisiro. Kuda kuziva (matanho api?) Uye manzwiro (akashamiswa!).
Zvichida hachisi chimwe chinhu chinoyemurika sekutora pikicha. Pamwe iri kutarisa matai ako! Wanga uchizonyora nezve matipi kubva kune nyanzvi makanika. Asi… Zvakavanzika zvehunyanzvi zvekuwedzeredza Tire Hupenyu Pasina Kupira Kudzivirira. Iyo posvo inogona kunge iri yekuchengetedza mweya kumanikidza uye kutenderedza matai ako ... asi iwe unogona kushandura hurukuro nekupinza mukuda kuziva (zvakavanzika?) Uye nemanzwiro (chengetedzo!).
Usatora izwi rangu nezvazvo. Iipe iyo pfuti pane yako inotevera akateedzana eblog blog. Kana iwe uchigona kuwedzera tinya-kuburikidza nemitengo, zvinyorwa zvako zvichaonekwa zvakanyanya, zvakagovaniswa zvimwe, uye zvinotungamira kune rimwe bhizinesi. Enda unoputika mukuzivikanwa!
Tags: chiringaManzwironyora zvinyorwa zvemashokokunyora
2013 Nhare yekushambadzira Mateki uye Mifananidzo
Jan 2, 2014 pa 9: 59 AM
Doug, ichokwadi kuti iyo linkbait "yakashanda" mupfungwa yekuti ndiri pano. Ndakaverenga tsamba yako. Asi ini handina kuiverenga nekuda kwemusoro wenyaya - ndakaiverenga nekuti ndaiziva munyori uye ndaifunga kuti unogona kuzadzikisa vimbiso yako.
Uri kuwana kuwanda kwetraffic nenzira iyi, uye urikutora kubatanidzwa kubva kwandiri muchimiro chekutaura, asi ndiri kunyatsonzwa zvishoma wakabatanidzwa muchako chako panguva ino. Ini handidi kugovana iyi posvo. Handifungi kuti yakapa chero chinhu chandisina kuziva pamberi.
Asi icho chingave icho chinangwa chako. Ini ndinofunga masayiti senge Akakodzera uye Buzzfeed ari kuyedza kutora mamirioni avanhu kuti vapfuure nekuti ivo havafarire kukwidziridzwa kwepamusoro. Ivo vari kutsvaga kuratidzwa kune kwavo kushambadzira uye kuziva chiziviso, kwete vanhu vanokudziridza kuremekedza hunyanzvi hwavo uye zvakadzama kutaurisa.
Zano rako rinoshanda here? Zvinoenderana nezvinangwa zvemushambadzi. Kana iwe uchida vanhu vanofadzwa ne "chakavanzika" chekutenderera matai ako kana "kushamisika" nezano rekushandisa mutemo-we-chetatu, saka pamwe iyi fomula yakakosha. Asi ini ndinoziva kune uyu mutengi, ndiri kuyedza ASI kudzvanya pane linkbait. Ndiri pano chete nekuti ndinokuziva iwe pachako. Chero ani zvake ane zita iri angadai akaregeredzwa.
Kutyisa kunotyisa @robbyslaughter: disqus - uye iwe uchaona kuti ndinobvumirana zvachose. Ini handinyatsoshandisa zano iri pablog rangu uye rakandidzima pane mamwe mablog. Ini ndoda kunyora zvirinani kutumira mazita, zvakadaro, ndisingapfuure pabhodhi nekunyengedza vanhu. Nepo zano iri ringave riri pamusoro - ini ndinofunga kushandisa kuda kuziva uye kubata mukati memanzwiro kwakakosha… pasina cheesy linkbait. Kutenda nekutanga hurukuro huru!